Anyị bụ ndị Webtalk Stars Team 🏆 - 💌 WebTK - Ticket gi ka WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
June 12, 2020 Nwere ike 5, 2019 by Webtk.co
Webtalk bụ ngagharị iwe na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma anyị na-eme nke gị Webtalk enwe ahụmịhe! Ha niile n'efu!
New ka Webtalk? Lee ihe ngosi a dị mkpirikpi:
Lee ihe mere ịbanye Webtalk na anyị bụ nhọrọ kachasị mma ị nwere ike ịme:
The Webtalk Stars Team is anyị otu n’ime Webtalk. Anyị na-atụ anya na ọ ga-aghọ gi kwa!
mkpa: naanị nke ụzọ efu isonyere ndi Webtalk Stars Team bụ imepụta a Webtalk akaụntụ site na profaịlụ anyi, ma ọ bụ ịbanye “STAR” mgbe a jụrụ gị onye kpọrọ gị. Wayzọ ahụ ị bụrụ ntụgharị aka nke anyị na onye nnọchite anya ndị otu egwuregwu anyị. Ọ bụrụ n ’ị banyelarị Webtalk, i nweghị ike isonyere otu anyị, belụsọ ndị ahọpụtara ndị kwụrụ ụgwọ nnabata ($ 995) ma ọ bụ ndị ọrụ na-ewepụ akaụntụ ha wee mepụta nke ọhụrụ n'ime otu anyị. Kpọtụrụ anyị ọ bụrụ na i nwere ajụjụ ọ bụla.
The Webtalk Stars Team onye ntinye intaneti na ogu nka sitere na intaneti Jacques-Louis Kreiss, onye sonyeere Webtalk dị ka onye ọrụ beta na-amalite n'oge Ọktoba, 2018 wee wepụta weebụsaịtị dị ugbu a na Eprel, 2019. Anyị bụ Onwe Webtalk Mgbakwunye.
Nzube nke Webtalk Stars Team bụ ịnye ndị otu ya ọtụtụ uru dị na ya.
Ego 50% ga - eso na ndị nduzi anyị maka ndu: anyị were ihe atụ nke Webtalk onye soro ndị ọrụ ya ihe ruru 50% ego ha nwetara wee kwalite ya karịa, na-enye ndị otu 50% ego ha ga - enweta oke ego n’elu nke ahụ. Ọ bụrụ na Webtalk Stars team na - enweta ezigbo ego $ 100,000 n'otu ọnwa site na Webtalk, ọ ga-ebipụta 50% nke ego ahụ: $ 50,000 dị ka atụmatụ ndị a:
$ 5,000 ga-aga na-abaghị uru na ọrụ ebere
A ga-eji 10,000 mee ihe na ọzụzụ na ịnye ndị òtù anyị aka inyere ha aka ịga nke ọma Webtalk
$ 30,000 ka a ga-ekenye ndị otu anyị ọzọ dabere n'ọnọdụ ha nọ na ndị otu a
$ 5,000 na-echere maka mmefu ndị nkịtị, ụtụ isi na ụgwọ azụmahịa.
Ọzụzụ a raara nye maka ndị otu egwuregwu niile. Ihe ịga nke ọma gị bụ ihe ịga nke ọma anyị ọ bụ ya mere enweghị njedebe maka mbọ anyị na-etinye iji mee ka ị bụrụ mmeri Webtalk onye ọrụ, influencer na mmekọ
Tonweta nweta ihe eji enyere gị aka na akụrụngwa pụrụ iche maka gị ka ị baa uru karịa n'iji na ịkwalite Webtalk
Onyinye ngosiputa eweputara iji gosiputa gi ma nyere gi aka itolita ihe ndia.
Anyị enweghị ike inyekwu ndị ọzọ aka. Ugbu a mkpebi bụ nke gị: ịchọrọ ịbanye na nke ọ bụla Webtalk otu ma ọ bụ ịchọrọ isonye nke kacha mma Webtalk otu?
Iji sonyere Webtalk na Webtalk Stars Team, pịa “Soro Webtalk"Si anyị profaịlụ Ebe a.
History: anyị kesara ozi mbụ anyị na August 2019 😄 Lee lee obi ụtọ Iloanya na-enweta nyefe ego ya n'ụlọ akụ si Webtalk Stars Team 😍
Anyị na-ahụ ụzọ ka ị nwee ike ịtụkwasị anyị obi!
Hụ akụkọ mmepụtaghachi ozi anyị zuru ezu yana ihe akaebe ịkwụ ụgwọ na nke anyị Ego Ego Revenue...
Kedu ihe kpatara STARS họrọ ndị Webtalk Stars Team?
Nke a bụ ihe anyị Stars nata:
Nkwado VIP na ịnye ọzụzụ n'otu n'otu n'ihi na ị gaziere ya Webtalk
Gị “onyinye gị n'ụlọnga” n'ime Webtalk : anyị na - enyere gị aka ijikọ ndị ọkachamara nwere ụdị echiche na ndị isi ụlọ ọrụ gị iji chụga ọrụ gị n'ihu
50% ego ha ga enweta ego maka ndị otu anyị niile: Site na isonyere Ndị otu anyị ị na-enye aka na ụba nke ọtụtụ na nke gị! Onyinye anyị nyere ndị ọrụ ebere 5% aka ga-enyere gị aka igosipụta nkwado gị maka ụwa ka mma
Access nweta nnweta resources na ngwaọrụ dị iche iji nyere gi aka inweta mmetuta ma kpata ezigbo ego eji enyere gi aka ikwado
Jikọọ Webtalk Ugbu a dị ka a VIP na Webtalk Stars Team! (100% n'efu)
Nke a bụ etu anyị siri chọọ isoro ndị otu anyị were ego anyị nweta:
Team Webtalk Stars Mmemme Ego Ego
Dabere na atụmatụ anyị, ndị otu egwuregwu 2 anyị (ndị otu nwere opekata mpe 10 dị ka nke 2020) kwesịrị inweta ebe ọ bụla n'etiti $ 100 na $ 1000 kwa ọnwa ma ọ bụ karịa n'ime afọ ise site ugbu a. Nke a bụ naanị maka ịbụ onye so na Webtalk Stars Team na anaghị etinye ego ị ga - enweta site na Webtalk. Lelee nke anyị mgbako ego iji hụ ego ole ị ga - enweta site na ya Webtalk. Biko mara na ịnweghị nkwa ọ bụla maka ego ị ga - enweta ma ọ bụrụ Webtalk esikwa na otu anyi.
Team Webtalk Stars Ego nnata maka ndị otu kpakpando 2 (ndị otu nwere obere opekata mpe 10 dị ka 2020)
Ohere inweta ego a puru iche diri gi ma oburu sonyere ndi otu anyi ugbu a. Will ga-ekele onwe gị na anyị maka ime mkpebi a mere eme taa.
Nwee obi ụtọ na azụmaahịa anyị kacha ọhụrụ ma hụ gị n'oge na-adịghị anya Webtalk!
Enwere onwe gị kpọtụrụ anyị ọ bụrụ na i nwere ajụjụ ọ bụla.
PS: anyị na-ebi na webtalkstars.com
Emelitere ikpeazụ June 12, 2020
Categories Banyere webtk.co Tags Digital media, Jacques-Louis Kreiss, Mass media, Mgbasa ozi ọhụrụ, elekọta mmadụ media, Social netwọk, Web 2.0 6 Comments Mail igodo
Webtalk Akụkọ Mmelite site na RJ Garbowicz - 2019-05-05
Webtalk Akụkọ Mmelite site na RJ Garbowicz - 2019-05-06
Echiche 6 na “Anyị bụ Webtalk Stars Team ”
July 2, 2019 na 4: 02 pm
esi malite, ihe bụ nzọụkwụ mbụ
November 26, 2019 na 4: 47 pm
Nzọụkwụ mbụ bụ isonye Webtalk site na ịdebanye aha na https://news.webtalk.co/6629702
June 4, 2020 na 5: 06 pm
webtalk na-echekwa ihe ndị Africa kpọmkwem karịa nke Côte d'Ivoire?
June 4, 2020 na 7: 06 pm
Ee Max, ihe niile mba ụwa nwere ike iji Webtalk ma kwụrụ ụgwọ kwa ọnwa.
June 10, 2020 na 6: 36 am
Ego ole ka m ga-etinye na ya? webtalk Anọ m na ndịda Africa
June 10, 2020 na 10: 06 am
Webtalk bụ 100% free isonye, ​​na-arụkwa ọrụ nke ọma na South Africa. Enwere nkwalite Pro nhọrọ nke na-amalite na $ 20 / ọnwa ma nke ahụ nwere ike inye gị ohere inweta ụgwọ ọrụ ntụgharị aka na ọkwa 5 (oge erughi oke), mana ị nwere ike iji ikpo okwu ma nweta ihe na ya. Webtalk dika onye otu n’efu.
Home - Banyere webtk.co - Anyị bụ ndị Webtalk Stars Team 🏆